Delta Air Lines: Nitombo 450 isan-jato ny famandrihana iraisam-pirenena vaovao
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Delta Air Lines: Nitombo 450 isan-jato ny famandrihana iraisam-pirenena vaovao
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
Novambra 4, 2021
Ed Bastian, Tale Jeneralin'ny Delta Air Lines
Ny fanokafana an'i Etazonia dia misy fiantraikany tsara amin'ny mpanjifa any amin'ny firenena 33 eran'izao tontolo izao, miaraka amin'ny Delta manompo ny 10 amin'ireo tsy an-kiato ireo sy ny maro hafa amin'ny alàlan'ny foibe manerantany mifandray amin'ireo mpiara-miombon'antoka aminy.
Delta Air Lines dia nahita fitomboana 450% amin'ny famandrihana iraisam-pirenena raha oharina amin'ny enina herinandro talohan'ny fanambaràna fanokafana an'i Etazonia.
Sidina iraisam-pirenena maro no andrasana hiasa feno 100% amin'ny Alatsinainy 8 Novambra, ary betsaka ny mpandeha mandritra ny herinandro manaraka.
Ny fitakiana mafy dia hita taratra manerana ny fialam-boly sy ny mpanao raharaham-barotra mankany amin'ny toerana malaza toa an'i New York, Atlanta, Los Angeles, Boston ary Orlando.
Tao anatin'ny enina herinandro taorian'ny nanambarana ny fanokafana indray an'i Etazonia dia nahita fitomboana 450% ny famandrihana fivarotana iraisam-pirenena i Delta raha oharina amin'ny enina herinandro talohan'ny fanambarana. Sidina iraisam-pirenena maro no andrasana hiasa feno 100% amin'ny Alatsinainy 8 Novambra, ary betsaka ny mpandeha mandritra ny herinandro manaraka.
Ny fanokafana indray dia misy fiantraikany tsara amin'ny mpanjifa any amin'ny firenena 33 eran'izao tontolo izao, miaraka amin'ny Delta manompo ny 10 amin'ireo tsy an-kiato ireo sy ny maro hafa amin'ny alàlan'ny foibe manerantany mifandray amin'ireo mpiara-miombon'antoka aminy, ao anatin'izany. Air France, KLM ary Virgin Atlantic. Ny fitakiana mafy dia hita taratra manerana ny fialam-boly sy ny mpanao raharaham-barotra mankany amin'ny toerana malaza toa an'i New York, Atlanta, Los Angeles, Boston ary Orlando. Amin'ny fitambarany, ny zotram-piaramanidina dia hampiasa sidina 139 avy amin'ny toerana iraisam-pirenena 55 any amin'ny firenena 38 midina any Etazonia amin'ny 8 Novambra, manolotra seza 25,000 mahery.
"Izao no fiandohan'ny vanim-potoana vaovao ho an'ny dia sy ho an'ny olona maro eran'izao tontolo izao izay tsy afaka nahita olon-tiana efa ho roa taona," hoy izy. Ed Bastian, Tale Jeneralin'ny Delta.
“Na dia nahita firenena maro aza izahay nanokatra indray ny sisin-taniny tamin'ireo mpitsidika amerikana nandritra ny fahavaratra, ny mpanjifanay iraisam-pirenena dia tsy afaka nanidina niaraka taminay na nitsidika an'i Etazonia. Velom-pankasitrahana ny governemanta amerikana izahay tamin'ny fanafoanana ny famerana ny fitsangatsanganana ary manantena ny hampivondrona ny fianakaviana, ny namana ary ny mpiara-miasa amin'ny andro sy herinandro ho avy. ”
Ny sidina DL106 avy any Sao Paulo mankany Atlanta no sidina iraisam-pirenena voalohany an'ny Delta hidina any Etazonia araka ny fitsipika vaovao ny alatsinainy amin'ny 09:35 miaraka amin'ny am-polony akaiky kokoa.
Satria ny fahatokisan'ny mpanjifa amin'ny fiverenana dia, Delta Air-dalana, dia mampitombo ny sidina amin'ity ririnina ity avy any amin'ireo tanàn-dehibe eoropeana toa an'i London-Boston, Detroit ary New York-JFK, Amsterdam-Boston, Dublin-New York-JFK, Frankfurt-New York-JFK ary Munich-Atlanta.
Atlanta, seranam-piaramanidina tanàna niavian'i Delta, dia mijanona ho foibe iraisam-pirenena be mpampiasa indrindra miaraka amin'ny fiaingana 56 isan'andro mankany amin'ny toerana iraisam-pirenena 39. Manaraka izany ny tanànan'i Etazonia be mpitsidika indrindra, New York-JFK, izay manana fiaingana 28 isan'andro mankany amin'ny tanàna iraisam-pirenena 21.
Ny fanokafana ny dingana lehibe dia manome fampiroboroboana ny toekarena manerantany ary manamarika ny fanombohan'ny fanarenana ny orinasa iraisam-pirenena Delta. Notaterin'ny zotram-piaramanidina tamin'ity fahavaratra ity fa ny orinasam-pialam-boly an-trano amerikana dia efa tafaverina amin'ny ambaratonga 2019, saingy ny fameperana ny sisintany mitohy dia nanakana ny fanarenana manan-danja manerana an'izao tontolo izao. Ny fitsangatsanganana iraisam-pirenena mankany Etazonia dia nanome vola $ 234 lavitrisa ho an'ny toekarena amerikana, niteraka ambim-barotra $ 51 lavitrisa ary nanohana mivantana ny asa amerikana 1.2 tapitrisa tamin'ny taona 2019.
Ny teratany vahiny dia avela hiditra any Etazonia miaraka amin'ny porofo momba ny vaksiny sy ny fitsapana COVID-19 ratsy natao tao anatin'ny telo andro niaingana. Ny teratany vahiny tsy vita vaksiny dia afaka miditra any Etazonia raha tsy mahafeno fepetra ho an'ny maningana voafetra ary manolo-tena amin'ny fitiliana aorian'ny fahatongavana, ny confinement ary ny vaksiny. Tsy maintsy manome antsipiriany koa ny mpanjifa mba hahafeno ny fepetra takian'ny fifandraisana amerikana.
Ny mpanjifa rehetra 2 taona no ho miakatra dia tsy maintsy manao saron-tava mandritra ny dia, raha toa ka mijanona eo amin'ny toerany ihany koa ny fepetra fanatsarana ny fahadiovan'ny Delta. Tafiditra ao anatin'izany ny fanadiovana sy fanadiovana tsy tapaka ireo faritra voakitika amin'ny fiaramanidina sy eny amin'ny seranam-piaramanidina, ary koa ny famafazana elektrôkatika ao anaty fiaramanidina miaraka amin'ny disinfectant avo lenta mba hahazoana antoka fa tsy misy zavatra tsy voamarika.